Maaliif turtiin barnoota yuunivarsitii inni xiqqaan waggaa afur ta'e? - BBC News Afaan Oromoo
20 Hagayya 2019
Image copyright Ministry of Education
Ministirri Saayinsiifi Barnoota Olaanaa roadmaappii barnootaafi leenjii waggoota sadiif ol qarachisaa ture ALI bara 1912 irraa eegale bu'aa qormaatichaan argame hojiirra olchuuf akka jiru beeksise.
Dhimmoota jijjiramni irratti taasime keessaayis A.L.I bara barnootaa 2012 irraa eegalee turtiin barnoota yuunivarsitii kan wagga sadii ture waggaa afur akka ta'u Ministeerri kun murteesse.
Murteen kun qaama 'roadmap' barnootaa fi leenjii ministeerichi waggoota sadii oliif qorachiisaa ture yoo ta'u, rakkoolee armaan dura sirna barnootaa fi leenjii biyyattii keessatti mul'ataa turan ni fura jedha Ministeerichi.
Ministeerichi 'Roadmap' bara darbe dhiyaate ture irratti qorannoo dabalataa yuunivarsitota hirmaachisee erga taasiseen booda murtee kanarra gahame jedhan Pireezidantiin Yuunivarsiitii Amboo Dr Taaddasaa Qana'aa.
Barattoonni yuunivarsitii irraa eebbifaman hanqina maalii qabu kan jedhu erga qoratameen booda turtiin yuunivarsitii inni xiqqaan waggaa afur akka ta'u murtaa'e jedhan Dr Taaddasaan.
Kana malees, "Dhimmoota akka komunikeeshinii, dandeettii herreegaa, Loojikii, qaaccessanii yaadu ykn 'critical thinking' fi kkf irratti ijoolleen hanqina qabu kan jedhu qorannoon adda baafame," jedhan.
Turtiin barnoota yuunivarsiitii waggaa afur wayita ta'u, barattoonni marti waggaa jalqabaatti gosoota barnootaa waloo ykn 'common course' 'credit hour' 38 erga fudhataniin booda dandeettii isaanii cimsuuf danda'an fudhatu jedhan.
Yaadawwan furmaataa 'Roadmap' bara darbe dhiyaate keessatti eeraman Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanaa hojiitti hiikaa jira kan jedhan Dr Taaddasaan, "akkuma sagantaa 'freshman' dur kennamaa tureeti" deebii'a jechuun ibsu.
Gara fuuladuraaf qormaatni sadarkaa lammaffaa biyyaalessaa kan kutaa 10 hafee walumaagalatti kutaa 12tti akka kennamu yaadni jiraachuus ni dubbatu.
Rakkoowwan turan ni furaa?
Rakkoon sirna barnootaa Itoophiyaa keessa jiruuf kuni qofti fala hin ta'u kan jedhu Dr Taaddasaan, haa ta'u malee rakkoon tarkaanfiin kun hir'isuu danda'u jira jedhu.
"Barattoonni eebbifaman hanqina waa baay'ee qabu. Korsiiwwan dabalataa kana akka fudhatan taasisuun dandeetti afaan ingilizii, dandeettii herreegaa, fi hanqinoota biroo qaban akka furatan gargaara.
Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanoo gosa barnootaa ykn 'Course' waggaa jalqabaa kennaman jechuun kanneen armaan gadii tarreesse.
Critical Thinking, General Psychology, Global Trends Economics Communicative English I, Language Skills, Geography Of Ethiopia And The Horn, Mathematics (For Natural Science/ For Social Sciences), Introduction To Emerging Technology, Anthropology, Entrepreneurship, History Of Ethiopia And The Horn, Communicative English Language II, Moral And Civics Education, Inclusiveness, Physical Fitness
Gama kaaniin turtiin ijoolleen yuunivarsitii keessa turan waggaa tokkoon dabaluun, bilchina ijoollee irratti waan dabalu qaba jedhu Dr Taaddasaan.
Qulqullina barnootaa fiduuf garuu kuni duwwaan gahaa miti, barnoota idileen duraa irraa eegalee wanni hojjetamuu qabu hedduutu jira jedhu.
Akka Ministeerri Saayinsii fi Barnoota Olaanaa jedhutti rakkinoota qorannoon adda baafaman keessa tokko yuunivarsiitiiwwan barnoota irratti xiyyeeffatanii kennan, ittiin beekaman ykn 'Center of excellence' qabaachuu dhabuudha.
Kanaaf jecha A.L.I bara barnootaa 2013 irraa eegalee yuunivarsiitiiwwan barnoota irratti xiyyeeffatanii barsiisan akka qabaatan murtaa'eera.
Yuunivarsiitiiwwan biyyatti hundi wayita ammaa sagantaa wal fakkaatu kennu kan jedhan Dr Taaddasaan, "sagantaa wal fakkaatu kennuun akkuma jirutti ta'e sagantaa addatti fooyyessanii kennan ammoo hin qabani" jedhu.
Yuunivasiitiiwwan naannoo keessa jiran, dandeetti keessoo isaanii fi humna isaanii ilaalcha keessa galchuun sagantaalee muraasa irratti xiyyeeffannoon hojjechaa, wantoota kaan ammoo biratti hojjechaa deemuu danda'u jedhu.
''Roadmap'' Ministeera Barnootaan qophaaye maal of keessaa qaba?
Ganzabee Dibaabaa dorgommii Shaampiyoonaa Adunyaan ala taate
Atakaaroo tajaajila taaksii Raayid fi Biiroo Geejjibaa Finfinnee